Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vaovao momba ny dia any Israely » Tsidiho i Betlehema raha mbola azonao atao
Israel dia maniry ny mpizahatany hijanona ao amin'ny Hotely Israeliana lafo vidy ary mikasa ny hanao izany tsy ara-dalàna izy ireo raha mankafy ny hotely West Bank any West Bank any Betlehema. I Jerosalema sy Betlehema dia kilometatra vitsivitsy monja ny elanelany, ary ny ankamaroan'ny mpizaha tany dia mitsidika ireo tanàna roa ireo. Fa raha manana ny lalan'ny minisiteran'ny atitany israeliana dia hihasarotra ny matory any Betlehema amin'ny ampahany amin'ny dia rehetra.
Ity lalàna vaovao ity dia hahatonga azy io ho tsy ara-dalàna ho an'ireo mpizahatany tonga any Israel amin'ny maha-vondrona fitsangatsanganana azy ireo hijanona mandritra ny alina ao amin'ny West Bank. Ilay baiko, nivoaka tamin'ny volana lasa teo, dia mitanisa manokana an'i Betlehema ary toa mikendry vondrona fivahinianana masina kristianina. Tsy hisy fiatraikany amin'ny mpandeha tsirairay izany.
Raha niresaka momba ny olana ara-piarovana ny Minisiteran'ny Atitany tany am-boalohany, nilaza ireo mpandraharaha mpizahatany israeliana sy palestiniana fa natao hiarovana ireo hotely israeliana, izay lafo kokoa noho ny trano fandraisam-bahiny any amoron'i West Bank, ny fahaverezan'ny asa aman-draharaha. Tamin'ny farany, taorian'ny fitarainana imasom-bahoaka, dia naaton'ny Minisitera ny hetsika, saingy miahiahy ireo mpandraharaha mpizahatany amin'ny roa tonta fa havoaka isaky ny fotoana izy io.
Betlehema, miaraka amin'ny Fiangonan'ny nahaterahana, ary i Jeriko no tanàna tranainy indrindra, dia toerana fivahinianana malaza nandritra ny taonjato maro. Ny fikorontanana tany amin'ny faritra, ary indrindra ny fanafihan'ny mpampihorohoro tany Israel sy ny morondrano Andrefana, dia niteraka fizahana tampoka tamin'ny fizahan-tany. Andianà fifandonana nisy teo amin'i Israel sy ny Hamas Islamista tany amin'ny Lemak'i Gaza, farany tamin'ny 2014, ary koa andianà fanafihana antsy sy fitifirana tamin'ny 2015 sy 2016 izay nampanalavitra ireo mpizahatany maro.
Misy fambara anefa fa hiakatra ny fizahantany. Tamin'ny volana aprily dia niaina isan'ny mpizahatany betsaka indrindra israely tao anatin'ny iray volana, miaraka amin'ireo mpizahatany 394,000 mitsidika ny firenena, fiakarana 38 isan-jato raha nitaha tamin'ny taon-dasa. Zava-dehibe ihany anefa ny manamarika fa na ny taona tsara indrindra ho an'ny fizahan-tany any Israely - 2012, miaraka amin'ireo mpitsidika 3.5 tapitrisa - dia mampitaha azy raha oharina amin'ny firenena Afovoany Atsinanana hafa. Tonizia, ohatra, dia nanana mpizahatany 4.5 tapitrisa tamin'ny 2016, na dia nisy famonoana olona roa aza namono mpizahatany am-polony tamin'ny herintaona. Tamin'ny 2010 dia efa ho fito tapitrisa ny mpitsidika an'i Tonizia.
Fotoana fohy taorian'ny nanambarana ny baiko mandrara ny fijanonany alina any Betlehema dia nisy ny valiny avy amin'ny fiombonambe iraisam-pirenena momba ny fizahantany. Ireo mpandraharaha mpizahatany amin'ny andaniny sy ny ankilany dia misy vondrona namandrika tsara amin'ny taona ho avy. Ny tatitra tamin'ny haino aman-jery dia nilaza fa ny minisiteran'ny fizahantany israeliana dia tsy nifampidinihana.
"Io (ny baiko) dia mety hisy fiatraikany ratsy tsy ho an'ny Palestiniana ihany fa ho an'ireo mpandraharaha mpizahatany israeliana", hoy i Sami Khoury, filohan'ny Fikambanan'ny Mpikarakara Turista ho avy ny Tany Masina (HLITOA) tamin'ny The Media Line. Khoury dia miara-miasa amin'ny Sheppard Tours ary mitantana ny tranokala visitpalestine.pa, tranokala fitsangatsanganana ho an'ny mpandeha mahaleo tena maniry ny hamolavola ny zavatra niainany West West manokana.
Nilaza ny Palestiniana fa raha ampiharina, ny baiko israeliana dia mety hisy fiatraikany ratsy.
"Ny fizahan-tany no ain'ny vondrom-piarahamonina Palestiniana maro, toa an'i Betlehema sy i Jeriko," hoy ny CEO ny fitsidihan'ny Green Olive, Fred Schlomka, tamin'ny The Media Line. Green Olive Tours dia mitondra vondrona amin'ny alàlan'i Israel sy ny West Bank mba hanandrana manome ny mpitsidika ny lafiny roa amin'ny fifandonana.
Mpizahatany an'arivony no mandeha any amin'ny West West isan-taona, ary nilaza i Schlomka fa ny ankamaroan'ny mpanjifany dia mpivahiny liana liana amin'ny tontolo politika sy ara-pinoana any amin'ny faritra.
"Tena te-ho any Palestine aho ary hahalala bebe kokoa momba ny tantara, ny arkeolojia ny olona sy ny fomba amam-panaon'izy ireo," hoy i Nicki Spicer, 52 taona, dokotera iray avy amin'ny Fanjakana Mitambatra izay nitety izao tontolo izao, afa-tsy ny Moyen Orient.
Matahotra ny hitsidika ny morontsiraka Andrefana i Spicer, matahotra izy sao holavin'ny Israel noho ny fiezahany hitsidika ny faritra fotsiny. "Matahotra aho raha havela hiditra ao Palestina amin'ny ladoany israeliana aho raha nanao ny dia," hoy i Spicer tamin'ny The Media Line tamin'ny alàlan'ny mailaka. “Fantatro fa tsy dia hahatsiaro ho maivamaivana loatra aho raha mikasa ny ho any Espana.”
Green Olive Tours dia tsy nampandrenesin'ny Minisiteran'ny Atitany mivantana momba io didy io. Mino i Schlomka fa ny fanapaha-kevitra hamoaka ilay baiko, na dia nangatsiaka aza taty aoriana, dia misy ifandraisany amin'ny politika kokoa noho ny fiarovana ny fizahan-tany. "Ny fihenan'ny Isiraely lavitry ny fenitry ny firenena demokratika," hoy i Schlomka.
Ny minisiteran'ny fizahantany ho an'ny manampahefana palestiniana dia nitatitra ny fitomboan'ny mpitsidika mandritra ny alina, miaraka amina mpizahatany 39,700 XNUMX mandany ny alina any amoron'ny West Bank noho ny tamin'ny taon-dasa.
Tsy misy isa marimaritra iraisana amin'ny isan'ny mpizahatany mankany Isiraely mankany Betlehema mandritra ny andro.
Israel mifehy ny sisin-tany miaraka amin'ny Banky Andrefana, ka manasarotra ny Fahefana Palestiniana hahafantatra izay miditra sy mivoaka ny firenena ary inona no tanjona.
Nilaza i Khoury fa manan-danja kokoa amin'ny toekarena ny fitsidihana mandritra ny alina fa tsy ny mpivarotra antoandro. Vondron'olona fitsangatsanganana lehibe dia hanao dia antsasaky ny andro any amin'ny faritra Palestine, toa an'i Betlehema, ary ireo fitsidihana fohy ireo, araka ny fahitan'i Khoury, dia tsy manome fotoana ampy ny mpizahatany hijerena sy handany vola amin'ireo toerana tsidihiny. Mino izy fa ny antony manosika ilay fandrarana naroso dia ny politika, nefa koa ny toekarena. Moramora kokoa ny mijanona ao Betlehema noho ny mijanona ao Jerosalema, ary noho ny firongatry ny fizahan-tany amin'izao fotoana izao any West Bank, Khoury dia mieritreritra fa ny fitomboan'ny fifaninanana no nahatonga ny Israel hihetsika bebe kokoa.
"(Palestine) izao dia afaka mifaninana amin'ny vidiny, serivisy ary fotodrafitrasa amin'ireo hotely israeliana," hoy i Khoury tamin'ny The Media Line.
Madison Dudley dia mpanao gazety mpianatra miaraka amin'ny The Media Line